घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू कोलम्बियाई फुटबल खेलाडीहरु येर्री मीना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
हाम्रो येरि मीना जीवनीले तपाईंलाई आफ्नो बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी (जेराल्डिन मोलिना), बच्चा, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थको बारेमा तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा, हामी कोलम्बियाई फुटबलरको इतिहास चित्रण गर्दछौं। हाम्रो कथा उसको शुरुआती दिनदेखि सुरु हुन्छ जब उसले खेलमा सफलता प्राप्त गर्‍यो।
येर्री मीनाको बायोको आकर्षक प्रकृतिमा तपाईंको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, आफ्नो प्रारम्भिक जीवन हेर्नुहोस् ग्यालरी उठाउन जुन उनको इतिहासलाई सारांश दिन्छ।
पूरा कथा पढ्नुहोस्:
मार्क-अरेन्ड टरे स्टेजेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
येर्री मिनाको जीवनी - उनको प्रारम्भिक जीवन र सफलता कहानी हेर्नुहोस्।
हो, सबैलाई थाहा छ उसले २०१ global विश्व कपमा विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त गर्यो, कोलम्बियाका लागि तीन गोल गरी - सबै हेडरहरू।
यस सम्मानको बावजुद, केहि थोरैले येर्री मीनाको जीवन कहानीको विस्तृत संस्करण पढेका छन्। हामीले यसलाई प्रेमको लागि तयार गरेका छौं। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
येर्री मीना बचपन कहानी:
येर्री मीना आफ्नो बाल्यकाल देखि परिवर्तन भएको छैन। के तपाईं मसंग सहमत हुनुहुन्छ?
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उहाँ उपनाम राख्नुहुन्छ - गोल्ड माइन। येर्री फर्नांडो मीना गोन्जालेज सेप्टेम्बर १ 23 1994 XNUMX मा २ mother औं दिनमा उनकी आमा मारियाना गोन्जालेज र बुबा जोसे युलिसेस मीनाको दक्षिण पश्चिम कोलम्बियाको ग्वाचेनमा रहेको थियो।
उनको जन्म पछि, उसका आमा बुबा आफ्नो पहिलो बच्चा र छोराको नाम राख्ने एक अद्वितीय तरीकामा सहमत हुनुभयो। के तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ? ... येरि मीनाको नामको मूल प्रख्यात कार्टुन श्रृंखला 'टम र जेरी' बाट आउँदछ।
वास्तवमा, मारियाना (उनको आमा) ले 'जेरी' को नाम छनौट गर्छिन् किनकि उनको जेरीप्रतिको प्रेमको कारण - त्यो कार्टुन श्रृंखलामा। उनले उनको जेरी नाम दिएकी उनको जेटर (माउस) मनपर्ने कार्टन चरित्रबाट 'J' निकालेर।
येरी मिनाका आमा बुबा - आमालाई भेट्नुहोस् - जोसे युलिसेस मिना र मारियाना गोन्जालेज।
उनीहरूको बुबा र आमाले उनलाई पाउनु भयो जब तिनीहरू तुलनात्मक रूपमा युवा थिए। आफ्नो परिवार यति चाँडो सुरु गरेर, जोस र मारियानालाले हजुरबा हजुरआमाका रूपमा सबै ऊर्जा प्राप्त गर्नेछन् - आफ्ना नातिनातिनाहरुलाई चारैतिर पछी।
जोरी युलिसेस मीना र मारियाना गोन्जालेज बीचको मिलनबाट जन्मेका दुई छोरामध्ये जेरी मिना पहिलो छोरा र बच्चा हुन्।
उनले शुरुका वर्षहरू आफ्नो सौतेनी भाइ क्रिस्टियन एन्ड्रेस र कान्छो भाइ जुआन जोससँगै बिताए।
मीना, परिवारहरूका सबै पहिलो जन्म जस्तै, एक प्रसिद्ध बच्चा थियो। हाम्रो अनुसन्धान टोलीले यस फोटोलाई उसको अविस्मरणीय बचपनको एक उत्तम क्षणहरू रूपमा ट्याग गर्नुभयो।
सानो येरि आफ्नो पहिलो जन्मदिन मनाउँदै।
उसको प्रारम्भिक कालदेखि उनको परिवारका सदस्यहरू र छिमेकीहरू पनि यरीलाई नम्र केटाको रूपमा हेर्दछन् जसले मानिसहरूलाई आदर गर्ने स्वाभाविक स्वभाव भएको थियो।
उनी त्यस्तो प्रकारका थिए जसले मारियाना र होसे (उसको आमाबुबा) लाई नसक्ने कुराको बारेमा गुनासो गर्दैनन्।
डोमिनिक क्यालभर्ट-लुई बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जेठो छोराको रूपमा, यरीले घरमा उदाहरण बसाल्ने जिम्मेवारी वहन गर्न सिके। सुरुमा उसले जुआन होसे र क्रिस्टियन एन्ड्रेसलाई हेरचाह गर्यो, उसका बच्चाहरू।
बच्चाको रूपमा, भावी तारा एक ठूलो कुकुर प्रशंसक भएको छ। घरपालुवा जनावरप्रतिको उनको प्रेमले वयस्कतामा पछ्यायो। यहाँ फुटबलर उसको कुकुरको नाम माडोना छ।
जेराल्डिन मोलिनासँग विवाह हुँदा पनि येर्री कुकुर प्रेमी भइन्।
येर्री मीना परिवार पृष्ठभूमि:
कोलम्बियाई एक खेल परिवारबाट आउँदछ, जीवन शैलीको साथ गोलकीपिंगको प्रेमको वरिपरि।
येरि मीनाका बुबा, जोसे युलिसेस मीना, अवकाश हुनु अघि गोलकीपर थिए। नतिजा स्वरूप, जवान उनीजस्तै हुनको लागि उत्सुक भए।
वास्तवमा, मीना काका पनि एक पेशेवर गोलकीपर थियो। त्यसमा कुनै छक्कलाग्दो कुरा थिएन कि हाम्रो केटाले उसको पेशा सबेरै पायो।
ध्यान दिनुहोस्, डिफेन्डर पनि एक गरीब परिवारबाट आउँदछ। जोसे युलिसीस मीनाको गोलकीपर कार्यले उसको परिवारको लागि थोरै पैसा कमायो।
के तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ? ... येर्री मिना बच्चाको रूपमा स्कूलमा ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि लोरिको पछाडि झुण्डिइन्। उसले फलफूल बेच्न एक दिनको १.1.50० डलर कमायो, यो विकासले उनलाई कडा परिश्रम गर्ने र जीवनमा बनाउने वाचा गरेका थिए।
येर्री मीना परिवार उत्पत्ति:
सबैभन्दा पहिले कुरा, कोलम्बियाली उसको देशको सब भन्दा ठूलो सहर - बोगोटा, मेडेलन, काली, आदि बाट आउँदैन। सत्य कुरा हो, मीनाको पारिवारिक जराले उसको नम्र शुरुआतको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ।
येर्री मीनाको उत्पत्ति गुआचेनी हो, कोलम्बियाको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित।
स्पष्टताको उद्देश्यका लागि, गुआचेन लगभग २०,००० व्यक्तिको सानो बजार शहर हो - जसमध्ये धेरैले येरिलाई उनको नायकको रूपमा सम्मान गर्दछन्।
यो त्यहि हो जहाँ उहाँ हुर्कनुभयो, गरीब फोहोर। फेरी, यस शहरका of 99% मानिसहरू फुटबलर सहित अफ्रो वंशका हुन्।
Yerry Mina शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
बाल्यकालदेखि नै मानिसहरूले सुनौलो खानीलाई धेरै मेहनतीको रूपमा हेर्दछन्, जस्तो कि उहाँ जानुभएको विद्यालयहरूमा। एक गरिब परिवारबाट आएका, मीनाले धेरैजसो स्कुल शुल्क तिरेको हकिंग फलबाट तिर्दछन्।
येर्री मीनाका अभिभावकले आफ्नो किशोर-किशोरावस्थामा फुटबलमा समग्र ध्यान केन्द्रित गर्ने विचार कहिल्यै स्वीकार गरेनन्।
सावधानीको रूपमा फुटबल असफल भएमा मारियानला र होसेले येरिलाई उनको शैक्षिक बीएसी (माध्यमिक शिक्षा स्तर) अध्ययन गर्न आग्रह गरे।
येर्री मीना शिक्षा: उसले स्कूली शिक्षाको समयमा दुबै इंटेलिजेंस र महत्वाकांक्षा राख्यो।
अपेक्षित रूपमा, नम्र केटाले खेलमा उसको पूरा ध्यान राख्नु अघि उनको बुबा र आमालाई गर्व बनाए।
यरीले सबैभन्दा राम्रो शिक्षा आफ्नो गृहनगर गुआचेनमा पाए। पछि, जब समय ठीक भयो, उसले आफ्नो कलिंग (फुटबल) स्वीकार गर्यो - ढिला बुमरको रूपमा।
येर्री मीना जीवनी - फुटबल कहानी:
युवावस्थाको क्यारियर शुरू गर्दै, येरीको जीनहरूले उसको शरीरको उचाइ, आकार र उपस्थितिलाई टेर्निंग गर्ने भूमिका खेल्न शुरू गरे।
उसको अग्लो स्वभावको कारण, हाम्रो केटा गोलकीपर बन्न चाहन्थे। जवाफमा, उनका बुबा र काका अस्वीकृत भए। आशयको बारेमा कुरा गर्दै, मीनाले एक पटक भने;
मेरो बुबाले मलाई गोलकीप गर्ने चीज ड्रप गर्न सल्लाह गर्नुभयो। उनलाई प्राप्त गर्दै, गोलकीपर पोष्टले धेरै त्यागको माग गर्दछ। उहाँ र अनौपचारिक हुनुहुन्थ्यो त्यो लिन मलाई जोखिम छ। मेरो बुबाले उहाँ मलाई चाहानुहुन्न उहाँ जानुभएको चाहनुहुन्नथ्यो।
आफ्ना बुबा र काकाको पाइला पछ्याउँदै, जवानले एक डिफेन्डरको रूपमा जीवन शुरू गरे। येर्रीसँग कहिल्यै बाल्यकालको क्यारियरको अनुभव थिएन, जुन धेरै फुटबलरहरूले to देखि १० वर्षको उमेरका बीचमा राखेका थिए।
क्यारियर फुटबलको साथ प्रारम्भिक जीवन:
ती दिनहरुमा, उनी आफैंलाई प्रशिक्षणको लागि यातायातको खोजीमा आर्थिक संघर्ष गरे। आफ्ना आमाबुबाको बोझ कम गर्न खोज्ने क्रममा मीना रातो बत्तीमा रोकिएर लोराहरूमा हाम फाल्ने बानी बनाए।
कडा परिश्रम र निरन्तरताका लागि धन्यवाद, उनी १ 18 बर्षे डेपोर्टिभो पास्तोको स्नातक भए। कुनै समय बिना नै, प्रकृतिले केन्द्रमा ठूलो आसन दिएर आशिष्‌ दिन थाले, जसले उनलाई विशाल जस्तो देख्यो।
१ At बर्षमा, मीना पहिले नै जायन्ट थियो। मीना र उसको टीम साथीको बिचको उचाई अन्तर यस संसारबाट बाहिर छ।
येरी आत्मविश्वासका साथ खेले, अतुलनीय फुटबल सामर्थ्य प्रदर्शन गर्दै आफ्नो टीममा अरू कोही पनि थिएनन्। उसको बहादुरीका लागि धन्यवाद, एक शीर्ष स्तरीय कोलम्बियाई टीम - स्वतन्त्रतावंता सान्ता फे - ले २०१ his मा आफ्नो सेवाहरू सुरक्षित गर्‍यो।
मीना तुरुन्तै नयाँ क्लबको साथ तत्काल हिट भयो। कार्डिनलहरूको नियमित स्टार्टर बनिर, उनले उनीहरूलाई दुई प्रमुख कप जित्न मद्दत गरे - कोपा सुदामेरिकाना र सुपरलिगा कोलम्बियाना - सबै २०१। मा।
येर्री मीना बायो - ख्याति कथाको लागि मार्ग:
मे २०१ May को पहिलो दिन उसको जीवनमा ठूलो उत्थान भयो। मिनालाई ब्राजिलियन साओ पाउलो क्लब जस्तै पाल्मेरासको नयाँ खेलाडीको रूपमा पुष्टि भयो गब्रिएल यीशु, Rivaldo, र रोबर्टो कार्लोस.
पहिलो पटक उसले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई ब्राजिलको अर्को भूमिमा बस्न बाध्य तुल्यायो। पाल्मिराससँगको उज्ज्वलताको कारण, foot फिट inches इन्च डिफेन्डर कोलम्बियाली राष्ट्रिय टोलीमा बोलाइयो। घाइतेले सीमित भएता पनि, मीनाको प्रदर्शन कहिल्यै चुर्केको थिएन।
चोटपटकबाट पुन: प्राप्ति पछि एक विवादास्पद स्टार्टर बन्नुभयो, रक्षात्मक राक्षसले उदात्त प्रदर्शनको श्रृंखला बनाउन शुरू गरे।
नतिजाको रूपमा, मिना आफ्नो टीमलाई क्याम्पेनाटो ब्राजिलियो सारी ट्राफी जित्न मद्दत पुर्‍याउँछिन्।
डिफेन्डर कत्ति डरलाग्दो थियो हेर्नुहोस्। यसमा कुनै अचम्म छैन कि ऊ सफल भयो।
२०१ 2018 वर्ल्ड कप कहानी:
प्रभावशाली प्रदर्शन को एक श्रृंखला को लागी धन्यवाद, Yerry आफ्नो देश को उनको टीम को एक महत्वपूर्ण सदस्य को रूप मा सूचीबद्ध देखी।
मे २०१ 2018 मा, उनको परिवारको आनन्दलाई कुनै सीमा थिएन किनकि उनी रसिया २०१ World विश्व कपको लागि कोलम्बियाको २--पुरुष टीमको बीचमा नाम कमायो।
टावरिंग सेन्टर-बैकले विश्वव्यापी अभियानमा प्रमुख भूमिका खेल्‍यो। त्यो अविस्मरणीय टूर्नामेन्टमा, येरिले एक डिफेंडरले एकल विश्वकपमा धेरै गोल (तीन) का लागि रेकर्ड प्राप्त गर्‍यो।
वास्तवमा भन्ने हो भने, गोल र बचावत्मक गुणहरूको लागि मीनाको आँखाले उनलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो स्टेजमा प्लेडिटहरू द्वारा प्रशंसा पुर्‍यायो।
तलको भिडियोमा देखिएझैं, हाम्रो केटाले तीन पटक गोल गरे, एक शानदार अन्तिम-मिनेट हेडर सहितको गेरैथ साउथेटअतिरिक्त समयमा इ England्ल्यान्डको।
को हातमा उनको देशको पेनाल्टी शुटआउट बन्द पछि जोर्डन पिकफोर्ड, एफसी बार्काले विशालमा पैसा कमाउने अवसरलाई मान्यता दिए जसको बजार मूल्य उच्च भयो।
स्पेनिश विशालले आफ्नो स्थानान्तरणलाई ट्रिगर गर्‍यो र उनको नाममा १०० मिलियन डलर जारी गर्‍यो।
येर्री मीना जीवनी - सफलता कहानी:
२०१ 2018 विश्व कपको ठीक पछि, नयाँ राष्ट्रिय नायकले आफ्नो जीवनको नयाँ अध्याय खोले। बार्का जस्तो ठूलो क्लबमा पुग्नु वास्तवमै येरिको लागि सबैभन्दा उच्च आशा थियो। यो उनको नजिकको परिवार र आफन्तहरुका लागि गर्व को एक ठूलो स्वाद थियो।
के तपाईंलाई थाहा छ? ...6फुट5शक्ति घर हिस्सा थियो एन्ड्रेस इनिस्टाब्लेग्राणा पक्षको साथ पछिल्लो सीजन। येरि मीनाको योगदानले बार्कालाई त्यो मौसममा ला लिगा र कोपा डेल रे शीर्षकहरू पछाडि मद्दत पुर्‍यायो।
येर्री मीना बार्सिलोना कहानी।
पछाडि तेस्रो विकल्पको रूपमा समाधान गर्न सहमत छैन Clément Lenglet र Gerard Piqué, येर्रीले स्पेनका विशालका साथ आफ्नो दिनहरू गणना गर्न शुरू गरे। उसको प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राख्दै, उसले चाहेका सबै पहिलो विकल्पहरू थिए।
शीर्ष प्रबन्धकहरूमा, Jose Mourinho उहाँलाई हस्ताक्षर गर्न उत्सुक भए। यद्यपि यो मिना नहुँदा निराश भएको कारण युनाइटेड बोर्ड र प्रबन्धकको बिचमा विश्वास टुट्यो र परिणामस्वरूप उनको झोलाको परिणाम भयो।
११ जनवरी २०१ 11, बार्सिलोना येवरी मिना को हस्तान्तरण को लागी एभर्टन संग सहमत भयो। के तपाई सचेत हुनुहुन्छ?… मीना एभर्टनमा सामेल भए किनभने उहाँ Angry Birds लाई माया गर्नुहुन्थ्यो। यो लोकप्रिय एनिमेटेड भिडियो खेल कार्टुन हो।
यदि तपाईं सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ, एंग्री बर्ड्सले एक पटक एभर्टनको साथ स्लिभ स्पोन्सरशीप डील गरेको थियो। धन्यबाद, मर्सीसाइडमा नयाँ जीवनले पावर हाउसले पूर्व टीमका साथ पुन: एकजुट भएको देख्यो; को मनपर्दो लुकास डोगेज र पोर्तुगाली आंद्रे गोम्स.
येरि मीना २०१ 2018 वर्ल्ड कपको गौरव दिवसहरू भएदेखि हामी आर्चेटाइपल कोलम्बियालाई चिन्छौं जो खेलमा आफ्नो payingण तिर्ने गर्छ। हो, एभर्टन प्रशंसकहरू गवाही दिन सक्छन् कि उनीहरूको 6ft 5in कोलोसस आफ्नो रक्षा को हृदय हो।
साँच्चै, येरि मीनाको बुलेट हेडि,, शक्ति, र स्ट्यान्ड ट्याकलहरू कुनै पछाडि छैनन्। कुनै श doubt्का बिना, उसको २०१ World विश्वकप सफलता कहानी सधैं उनको हृदयमा रहनेछ। बाँकी, Lifebogger आफ्नो बायो को भन्छ, ईतिहास हो।
जेराल्डिन मोलिनाको बारेमा, येरी मिनाको श्रीमती:
डिफेन्डरको उपलब्धि उसको महिला पार्टनरको समर्थनले सम्भव भएको हो। गेराल्डिन मोलिना बाक्लो र पातलो हुँदै उसको मान्छेसँग उभिरहेकी छिन्।
वास्तवमा, केवल येरि र उसको आश्चर्यजनक श्यामलाको एक झलक लिएर, तपाईं उनीहरूलाई धेरै मिल्दो भन्न सक्नुहुन्छ।
येर्री मीनाकी पत्नी उनका लागि सम्पूर्ण विश्व हो।
गेराल्डिन मोलिना को हो?
सर्वप्रथम, उनी मे १31995 of को तेस्रो दिनमा जन्मेकी थिइन।
धेरै ब्लगका अनुसार, कोलम्बियाई वाग र उनको परिवार गुआचेनीका हुन्, जुन उनको जीवनसाथी जत्तिकै गृहनगर हो।
येर्री मीना जेराल्डिनलाई भर्खरै किशोरावस्थादेखि नै चिनिन्छिन्। दुबै एक समयमा भेटिए उनले फुटबलमा केही हासिल गरेन।
प्रेम र विश्वास बाट, तिनीहरूले एक अर्कालाई माया गर्न थाले - योरी को समय देखि Deportivo Pasto संग।
उनको सम्बन्ध मा सबै वर्ष को लागी, Geraldine निस्वार्थ रहन्छ। उनी जहाँसुकै फुटबल खेल्छिन्।
एभर्टन वैग यस्तो प्रकार हो जसले आफ्नो पतिलाई भावनात्मक समर्थन प्रदान गर्दछ, यदि यसको मतलब यसले आफ्नो जीवनलाई समात्छ भने।
यो उनको हिप्स, आकार, वा सुन्दरता मात्र हैन, तर सुनको मुटुले जेराल्डिन मोलिनालाई यति सुन्दर बनाउँदछ।
येर्री मीना नियमित रूपमा आफु र उनको श्यामलाको मनपर्दो तस्वीरहरू पोष्ट गर्दछ। एक पटक एक पटक, उसले जेराल्डिन मोलिनालाई अन्तिम प्रश्न पोप गरे पछि उसको भिडियो बनाए।
हेर, त्यो अविस्मरणीय क्षणको दृश्य।
येर्री मीना र उनकी श्रीमती कोलम्बियाको टीममा उनका सहकर्मीहरूमध्ये सबैभन्दा स्थापित जोडी बनेका छन्।
जब म उसको बायो लेख्छु, दुबै जोडीले आफ्नो पहिलो बच्चा, एक छोरीलाई स्वागत गरेका छन्। टावरि defend डिफेन्डरका लागि, जेराल्डिन र मारियाना (उनको आमा) उसको मुटुको नजिकै रहन्छन्।
दुई व्यक्तिलाई भेट्नुहोस्।
येर्री मीना व्यक्तिगत जीवन:
उसको डरलाग्दो उचाईको आकार र लाखौं मानिस बैंकको खातामा जान्छन्, त्यसका ठूलो मानिस तपाईले भेट्ने सबैभन्दा नम्र व्यक्ति नै हुनुहुन्छ।
फुटबलबाट टाढा, येरि मीना आफ्नो इ England्ल्याण्डको घरमा आफ्नो साथी, गेराल्डिनसँगै स्फूर्तिदायी नम्र जीवन बिताउँछिन्।
उसको व्यक्तित्वको बारेमा, कोलम्बियाका मानिसहरु, खास गरी बच्चाहरुको स्नेह स्वाभाविक रुपमा जित्छ जहाँ उनी गए पनि। बच्चाहरू बीच, एभर्टन किड्स (विशेष रूपमा) येरि तिनीहरूको नृत्य चालहरूको साथ उनीहरूको मनोरञ्जन पाएकोमा रमाउँदछन्।
यहाँ उनको नृत्य कौशल को एक क्षण छ, एक भिडियो जहाँ प्रोफेसर मीना र उनको ब्राजील टीमका साथी र मित्र, रिचर्लासन, तिनीहरूको नम्रता प्रदर्शित।
येर्री मीना जीवनशैली:
उसको खेलको लागि धन्यबाद, कोलम्बियालीले वित्तीय स्वतन्त्रताको लागि आफ्नै अंश बनाएको छ। आफ्नो ठूलो ज्यालाको बाबजुद, मीना एक मितव्ययी सोच छ।
उनले आफ्नो सम्पत्ति प्रशंसकहरूलाई कहिल्यै प्रदर्शन गर्दैनन्। सरल भाषामा भन्ने हो भने, डिफेन्डर एक विदेशी जीवनशैलीको औषधी रहन्छ।
येर्री मीना कारहरू:
यद्यपि, उहाँसँग उनीहरूसँग धेरै छ। तर मीना आफ्नो कार र अन्य सम्पत्ति निजी राख्न मन पर्छ। ऊ केवल सार्वजनिक बनाउँछ, उसको प्रायोजन स्वत: निर्माण कम्पनीहरूसँग।
एक प्रमाणको रूपमा, यहाँ कोलम्बियाई दुई सेट कारहरूको साथ प्रस्तुत गर्दै छन्; एक BMW र फिएट आर्गो - पूर्ण रूपमा व्यापार र मार्केटिंग उद्देश्यको लागि।
येर्री मीना कार यी ब्रान्डबाट टाढा हुन सक्दैन।
येर्री मीना पारिवारिक जीवन:
गुआचेनीका लागि उनको परिवारलाई माया गर्नु नै उनको ठूलो आशीर्वाद हो। यहाँ भिडियो प्रमाणको एक टुक्रा छ।
वास्तवमा, फुटबल पैसाको कुनै पनि रकम येर्रीले आफ्नो आणविक परिवारसँग बिताएको समय लिन सक्दैन। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई उनको आमा बुबा, भाइ, र आफन्तहरूको बारेमा बढी बताउनेछौं।
यो येर्री मिनाको परिवारका सदस्यहरू हुन्। के तपाई कतै साम्य भेट्न सक्नुहुन्छ?
यारी मिना बुबाको बारेमा:
जोसे युलिसेस मीनाको पहिलो जन्म बच्चा थियो जब उनी तुलनात्मक रूपमा सानो थियो (२० वर्षको उमेर)।
त्यो प्रारम्भिक उमेरमा आमाबाबु बन्नुमा आफ्ना जवान काँधमा ठूलो जिम्मेवारी राखियो। यस कारण र अन्यहरूका लागि, जोसे युलिसेस परिवारले स .्घर्ष गरे।
जेरी मिनाका बुबा गोलकीपरको रूपमा थोरै अवसरहरू पाउँथे। त्यस कारणले, यसले उसलाई आफ्नो फुटबल सपना त्याग्न बाध्य तुल्यायो। धन्यबाद, जुन उनको परिवारको लागि कठिन समय भयो पछि एक आशिषमा परिणत भयो।
येर्री मीनाले आफ्नो बुबासँग बचपनदेखि नै राम्रो सम्बन्धको आनन्द उठाएको छ।
अहंकारी बुबा आफ्नो जेठो छोरा जत्तिकै नम्र छ। जोसे युलिसेसले आफ्नो छोराको धेरैजसो व्यवसायहरू व्यवस्थापन गर्छन्, येर्री मिना फाउन्डेशन सहित उसको गुआचेन गृहनगरमा।
उसको परिवारले बार्सिलोनालाई पहिलो कोलम्बियाई (उसको छोरो) भाँडा दिएर इतिहास बनायो।
येर्री मीनाकी आमाको बारेमा:
फुटबलरले आफ्नो जीवनको पहिलो महिलासँग घनिष्ट सम्बन्ध साझा गरे।
उनको जन्म पछि, Marianela येरि को मातृ प्रेम सबैभन्दा शक्तिशाली भएको छ, जसले सकारात्मक उनको छोराको विकास लाई प्रभावित गरेको छ।
मारियानाको सबैभन्दा ठूलो खजाना उनको पहिलो छोरो हो। येरि र उसको आमा दुबै बाल्यावस्थादेखि नै घनिष्ट बन्धन साझा गरेका छन्।
आमाको पूर्तिको भावना पहिलो चीज हो जुन तपाईंलाई मारिनेछ जब तपाईं मारियानला गोन्जालेजलाई भेट्नुहुन्छ। यरीले बारम्बार बलि चढाएकी छिन उनी लगातार उनको अनुहारमा राख्न सकीन्छन्।
मीनाले सानै उमेरदेखि नै भाकल गर्यो कि उसले मारियानाला, उसको आमा, मुस्कुराउने छ।
उनको घर बनाउनु बाहेक, येरीले उनको आफ्नो निजी बजेटको हिस्सा बनाउने आफ्नो दायित्व पूरा गरी।
पछि, उसले आफ्नो आमालाई (परिवारको लागि) दिन्छन् - 4,000,००० उसको ,6,000,००० ज्याला र बाँकी प्रयोग गर्दछ तालिम पछि खाना किन्न।
मारियानाले आफ्नो छोराबाट उनको भित्री शक्ति तान्छिन् - यस्तो चीज जसले उनलाई यी दिन अझ आरामदायी देखिन्छ। उनी युवा देखि अधिक सुन्दर देखिन्छ बर्ष जान्छ।
यो एक के रूप मा एक सफल फुटबलर भएको कारण हुन सक्छ। मारियाना जीवनको सब भन्दा राम्रो रमाईलो अनुभव गर्दैछिन।
येर्री मीना भाइको बारेमा:
जुआन होसे नाम हो। फेरि, येरि उसको सबैभन्दा ठूलो मूर्ति बनेको छ। अहिले हुर्किसकेका जुआन पनि फुटबल जीवन बिताउँछन्।
येरि मीनाको बायो सिर्जना गर्ने समयमा, उसको कान्छो भाइ कोलम्बिया अण्डर १ team टीमको अगाडि र विger्गरको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्।
१ 14 वर्षको उमेरमा धेरैले जुआन होसेलाई उसको ठूलो भाइ जस्ता गुणहरू देखाउन चिन्छन्। उदाहरण को लागी, उहाँ यरी जस्तै एक हेयरस्टाइल, येर्री जस्तै हिंड्ने, Yerry जस्तै कुरा, र जेरीको Mina गोल समारोह नृत्य पनि प्राप्त गर्दछ।
२०२१ सम्म, जुआन जोसेले डेपोर्टिभो क्यालीको युवाको लागि सुविधा प्रस्तुत गर्‍यो।
जुआन होसेका लागि, ठूलो भाई भएकोले यो सफल भएकोमा गर्वको सबैभन्दा ठूलो भावना आउँछ।
येर्री मीनाका आफन्तहरूका बारे:
हामी उसको काका Jair Mina नामबाट शुरू गर्छौं। यो मान्छे बिना, येरि आफ्नो पेशे को लागी सहज सुरुवात कहिल्यै गर्न सकेको छैन। उनको बुबाको भाई एक महान आफन्त हो, डेपोर्टिभो पास्तोसँग उसको पहिलो परीक्षणको लागि उनलाई लिन जिम्मेवार मानिस।
येरि मीनाले आफ्नो काका, जैर मिनासँग फोटो लिन्छ।
पूर्व गोलकीपर येरि बुबासँग धेरै नजिक छन्। जस्तो म लेख्छु, ऊ मिनालाई एजेन्टको रूपमा सेवा गर्दछ। जैर मीना सुन्दर सम्झौताको पछाडिको मस्तिष्क हो - एक जसले मिनालाई आफ्नो बोसो ज्याला कमायो।
येर्री मीना अनटल्ड तथ्यहरू:
यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई foot फिट col कोलोससको बारेमा केही सत्य बताउनेछौं। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
तथ्य # १ - एभर्टन तलब ब्रेकडाउन:
एवर्टोन सालरी पाउन्ड्स (£)
प्रति वर्ष: £ 6,336,000
प्रति महिना: £ 528,000
प्रति हप्ता: £ 120,000
हरेक दिन: £ 17,143
हरेक घण्टा: £ 714
हरेक मिनेट: £ 12
प्रत्येक सेकेन्ड: £ 0.19
तपाईंले येर्री मिना हेर्न शुरू गर्नुभयो'बायो, यो उसले एभर्टनको साथ कमाएको हो।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... इ England्ल्यान्डमा औसत व्यक्ति जसले प्रति वर्ष ,30,000०,००० पाउन्ड कमाउँछ, Ever बर्ष लागी येर्री मिनाको साप्ताहिक तलब एभर्टन बनाउनको लागि हुन्छ।
येर्री मीना नेट वर्थ:
२०१ 2013 देखि, जब उसले आफ्नो फुटबल पेशा शुरू गर्‍यो, येरि जेयर र वासेरम्यान एजेन्सी अन्तर्गत एक ठूलो भाग्य बनाएको छ। 2021..6.3m को २०२१ को तलबको साथ, प्रायोजन सम्झौताहरू सहित, हामी er २०m मा येर्री मिनाको २०२१ को शुद्ध मूल्यको महत्त्व राख्छौं।
तथ्य # १ - येरी मिनाको कसरत:
Foot फिट be जनावरले ड्रिलहरू गर्दछ जुन हप्ताको हरेक दिन उसको बडीटाइप सूट गर्दछ। येर्रीले कुनै दिन प्रशिक्षण नहुँदा पनि व्यायाम गर्दछन्। यहाँ उसको कसरत भिडियो छ।
तथ्य # १ - येरी मिनाको धर्म:
जस्तै रिकार्डो काका, गुआचेनी मूल निवासी एक भक्त ईसाई हो। येरि नियो-पेन्टेकोस्टलको CGMJCI का एक सक्रिय सदस्य हो।
यो एक्रोनिम भनेको चर्च अफ गउड मिनिस्ट्री अफ जीसस क्राइष्ट अन्तर्राष्ट्रिय हो। उनको धर्मले अपेक्षा गरेको अनुसार, मीनाले सार्वजनिक रूपमा ख्रीष्टप्रति आफ्नो भक्ति देखाउँदछ, पिचमा समेत।
हामी यस फोटोमा येरी मिनाको धर्मको व्याख्या गर्दछौं।
चर्चहरू प्राय: बिग डिफेन्डरलाई उनीहरूको कार्यक्रमहरूमा अतिथि वक्ताको रूपमा आमन्त्रित गर्छन्। त्यहाँ मीना आफ्नो जीवन, विश्वास, र परमेश्वर प्रति वचनबद्धताको बारेमा कुरा गर्दछन्।
तथ्य #4- Barefoot बार्सिलोना प्रस्तुतीकरण:
येरी एकदम परम्परागत मानिस हो। परम्पराले आशा गरे अनुसार उनी आफैंको परिवारको पुरानो विश्वास र आचरणमा संलग्न हुन्छन्।
आफ्नो बार्सिलोना प्रस्तुतीकरणको बेला, विश्व कप स्टारले आफ्नो उत्पत्तिको सांस्कृतिक सिद्धान्तहरूको पालना गर्‍यो।
हो, भइरहेको छ बार्सिलोना द्वारा भाडामा लिने पहिलो कोलम्बियाई ठूलो सम्मान हो। युरोपमा भाग्य खोज्न उनको खोजीमा, मीनाले क्याम्प नो टर्फमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले उनको जुत्ता र बुटहरू निकाल्नुपर्थ्यो। तल भिडियो छ।
धेरै कोलम्बियाका फुटबलरहरूले यस पुरानो-लामो परम्परागत अभ्यास अभ्यास गर्छन्। उदाहरण को लागी, लाई मनपर्दछ अल्फ्रेडो मोरेलोस र डुवन जपता, आदि
तथ्य #5- खराब खेल रेटिंग्स:
२०२१ सम्म येरि मीनाको प्रोफाइल (फिफा) उसले पिचमा दिने कुरासँग मेल खाँदैन।
Cup and र potential१ सम्भावित स्कोर एक विश्वकप खेलमा सर्वाधिक स्कोर गर्ने डिफेन्डरको रूपमा लेबल गरिएको एक व्यक्तिको लागि अनुपयुक्त देखिन्छ। नबिर्सनुहोस्, उनीसँग एभर्टनसँग राम्रो २०२० थियो।
येर्री मीनाको विनम्रता दुर्लभ छ, दुबै उसको व्यक्तिगत जीवन र पेशामा। ऊ त्यस्तो हो जसले प्रशंसकहरूको प्रशंसा पाएको छ। बच्चा भएदेखि, मीना जहिले पनि सबै चीजहरूसँग परिश्रम गर्दछन् - परिवार, धर्म, शिक्षा र क्यारियरबाट।
लाइफबगरले आफ्ना बाबुआमा (मारियाना गोन्जालेज र जोसे युलिसेस मीना) लाई उनकोमा उत्प्रेरित गरेकोमा, महान नैतिक मूल्यमान्यता जसले येर्री महान् बनेकोमा कृतज्ञता जाहेर गर्दछ। बढी, उनका काका (जैर मिना) ले आफ्नो फुटबलको जग निर्माण गर्न मद्दत गर्‍यो।
येरी मिनाको जीवनी हामीलाई एउटा कुरा सिकाउँछ। यदि तपाईं एक गरीब परिवार मा जन्मनुभएको हो भने, यो तपाईंको गल्ती होईन।
जे होस्, यदि तपाइँ कडा मिहिनेतमा निरन्तर हुन इन्कार गर्नुहुन्छ, यसैले गरिब रहिरहनुभयो भने, दोष तपाईंकै हो। एभर्टनको साथ येरी मिनाको रेकर्डहरू यो निरन्तरता को प्रमाण हो।
लस काफेटेरोसको एक बहुमूल्य रत्नको जीवन कहानीमा हामीसँग बस्नुभएकोमा धन्यवाद। Lifebogger मा, हामी जहिले पनि कोलम्बियाई फुटबल खेल कथाहरू वितरणको कार्यमा शुद्धता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं।
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंले मिनामा हाम्रो बायोमा राम्रो देखिने कुनै कुरा फेला पार्नुभयो भने। फेरि, हामी खुशी हुन्छौं यदि तपाईंले टिप्पणी खण्डमा डिफेन्डरको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ भनेर हामीलाई बताउनुभयो भने। अन्तमा, येरीको संस्मरणको छोटो सारांशको लागि, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
जैविक ग्राफिकल प्रश्नहरू
पूर्ण नामहरू: येर्री फर्नांडो मिना गोन्जालेज।
जन्म मिति: सेप्टेम्बर १ 23 1994 XNUMX को २rd औं दिन
जन्मस्थान: गुआचेन, कोलम्बिया
अभिभावक: मारियाना गोन्जालेज (आमा) र जोसे युलिसेस मीना (पिता)।
भाइ: जुआन जोसे
बहिनी: कुनै पनि
पत्नी: गेराल्डिन मोलिना
बच्चा: एक छोरी (२०२० सम्म)
सापेक्षिक: Jair Mina (अंकल)
एभर्टनको साथ वार्षिक तलब: ,,6,336,000,००० पाउन्ड।
नेट मूल्य: २० मिलियन पाउन्ड (२०२० तथ्या )्क)
उचाइ: १ 195 c सेन्टिमिटर वा १.1.95 meters मिटर वा feet फिट inches इन्च।
खेल्ने स्थिति: केन्द्र-फिर्ता।
थियो हर्नान्डेज बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
ग्राहम पोटर बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
करीम Adeyemi बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
पल ओनुचु बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
मार्क कुकुरेला बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
निकोला Vlasic बचपन स्टोरी प्लस अनकल्ड जीवनी तथ्य
इमर्सन रोयल बचपन स्टोरी प्लस अनकल्ड जीवनी तथ्य
पेड्री बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
अक्टोबर 26, 2021